Fitamiin D Yaraanta Dumarka Soomaaliyeed - Daryeel Magazine
Fitamiin D Yaraanta Dumarka Soomaaliyeed
Fitamiin D waxa uu kaalin wayn ka ciyaaraa isku haynta xubnaha jirka iyo caafimaadka guud, Helitaanka Vitamin D ku filan qofka waxuu ka caawiyaa koritaanka lafaha iyo ilkaha. Sidoo kale Fitamiin D-gu waxa uu xoojiyaa difaaca jirka.
Fitamiin D Yaraanta waxaa laga qaadaa cudurro dhowr ah sida: lafo jileec (osteomalacia) iyo lafo beel (osteoporosis).
Isha ugu muhiimsan ee laga helo Fitamiin D waa qoraxda sidoo kale waxaa laga heli karaa cuntooyinka qaar. Faaiidooyinka Fitamiin D-ga waxaa ka mid ah la daagalanka cudurrada, niyad-jabka iyo xoojinta shaqada murqaha. Wuxuu kaloo muhiim u yahay lafo caafimaad qaba oo xoogan.
Calaamadaha lagu garto fiitamiin D yarida
Faaidooyinka Fitamiin D-ga iyo khatarta ka dhalan karta haduu hoos u dhaco
Cuntooyinka laga helo fitamiin D-ga:
Kalluunka salmon iyo sardines
Ukunta qeybta huruuda ah
Caano garoorka (yogurt)
Daawo Ubahina Muuse oo sharraxaysa:
Muhiimada Vitamin D-gu U Leeyahay Dumarka Uurka Leh & Ilmaha Caloosha Ku Jira Calaamadaha Dhiig Yaraanta 7 Sababood Oo Keena Caano Yaraanta Naasaha Xanuunada Iyo Dhibaatooyinka Laga Qaado Hurdo Yaraanta